EPL: Kooxda Arsenal oo guul soo daahday ka gaartay West Brom, iyadoo geesiga Gunners ee kulankan uu ahaa Olivier Giroud iyo kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 26 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul soo daahday xilli dambe ka gaartay naadiga West Brom oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, geesiga kulankan ee Gunners ayaana ahaa Olivier Giroud.
Kulankan oo ahaa mid la isku daalay ayaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay kooxda Arsenal ayaa bedel ku saartay 71’daqiiqo qeybtii labaad ee ciyaarta Kieran Gibbs oo u muuqday inuu dhaawac yar soo gaaray oo lagu bedelay Nacho Monreal iyo Alex Iwobi oo garoonka laga saaray laguna bedelay Lucas Perez.
74’daqiiqo sidoo kale tababare Arsene Wenger ayaa garoonka ka saaray Francis Coquelin, waxaana uu soo galiyey Aaron Ramsey, iyadoo sidaas Gunners ku buuxsatay saddexdeeda bedel ee ay xaqa u lahayd.
Kooxda Arsenal ayaa la timid goolka guusha ay ku qaateen 87’daqiiqo dhammaadkii ciyaarta, waxaana kubbad uu soo karoosay Mesut Ozil, madaxa ugu dhaliyey Gunners Olivier Giroud, waxaana ay kulankan Arsenal ku badisay 1-0.
Arsenal oo sidaasi uga fogaatay inay soo gaarto guuldarradeedii saddexaad oo xiriir ah horyaalka Premier League ayaa haatan ku jirta kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 37-dhibcood 18 kulan oo ay ciyaartay.
Kulamadii kale ee ciyaaray horyaalka Premier League:-